Nsogbu 5 maka onye ọchụnta ego ọ bụla a ga-edozi yana ezigbo njikwa ngwanrọ | ECommerce ozi ọma
Nsogbu 5 maka onye ọchụnta ego ọ bụla a ga-edozi site na ngwanrọ njikwa nke ọma
ECommerce ozi ọma | | StartUps na ndi oru itumgbere ahia
Akọwapụta akpaaka Office dị ka akpaaka nke nkwukọrịta na usoro nhazi n'ọfịs. Ndị ọzọ okwu, ọ bụ banyere tinye sayensị kọmputa n'ọrụ ụlọ ọrụ na ọrụ. Maka nke a, akpaaka ụlọ ọrụ bụkwa ihe na mmemme kọmputa a na-etinye n'ọrụ ọfịs.
Obi abụọ adịghị ya na, akọwapụtara n'ụzọ dị otú a, ọfịs ọrụ ọfịs abanyela kemgbe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ ọ bụla. Ngwaọrụ kọmputa na-enyere anyị aka ịhazi ọrụ, mee ha ma ọ bụ nyochaa nsonaazụ ya, n'etiti ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ. E nwere ọtụtụ ngwanrọ na ngwanrọ nchịkọta nwere ike ịnye ihe ngwọta nye ndị ọchụnta ego. Dịka ọmụmaatụ, ndị ị nwere ike ịchọta n'ime https://www.ofi.es/software/gestion, ebe ị nwere njikwa na njikwa akụrụngwa dị iche iche maka njikwa azụmaahịa, usoro azụmaahịa ma ọ bụ ọkachamara site na ụdị azụmaahịa: maka ụlọ ahịa, ndị na-edozi ntutu isi, ụlọ akwụkwọ asụsụ ...
You hụla nsogbu ole a ezigbo ngwanrọ njikwa? N'ebe a, anyị ga-agwa gị naanị maka ndị nkịtị na ihe ndị bụ isi, mana o doro anya na iji ngwaọrụ ndị a adịla mkpa maka ụlọ ọrụ ọ bụla.
1 Nchịkwa usoro azụmahịa
2 Nzukọ akụ
3 Njikwa ego na mmefu
4 Ọrụ na nhazi oge
5 Oge ndị ọrụ na akụkụ anọ
Nchịkwa usoro azụmahịa
Nwee njikwa n'oge niile ịzụrụ ihe, nnakọta na ngwaahịa n'ụlọ nkwakọba ihe Ọ bụ otu n'ime uche nke onye ọchụnta ego ọ bụla. Ohere inweta ozi a n'otu ntabi anya, na ngwaọrụ ọ bụla (ọbụlagodi na ekwentị mkpanaaka) na ngosi dị mfe ma dabara adaba maka mkpa bụ otu n'ime nnukwu uru nke ngwa ọfịs.
Otu n'ime ọrụ ndị dị mkpa n'ọtụtụ ụlọ ọrụ bụ ịnọgide na-enwe a ihe omuma zuru oke na ihe omuma nke ulo ahia. Maka nke a, taa ọ dị mkpa ịnwe ngwa ọrụ akpaaka nke ụlọ ọrụ nke na-eme ka mmezu nke ọrụ ahụ rụọ ọrụ na ngwa a kapịrị ọnụ na ngosipụta nke na-enye ohere ịnweta ezigbo ihe ọmụma nke ngwaahịa ahụ n'oge niile. Taa, a na-egosikwa ngwá ọrụ ndị a na usoro a gbanwere na ngwaọrụ niile ma nwee ọtụtụ ndị ọrụ.
Njikwa ego na mmefu
Usoro nhazi dị mma ga-enyere gị aka jiri nlezianya na nghọta doo anya na-aza ajụjụ ụlọ ọrụ. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ijigide njikwa na ike zuru oke, obi abụọ adịghị ya na ịchọrọ ezigbo ngwanrọ njikwa, nwee ike ijikọ na otu ngwa ọrụ ihe ọmụma nke iwu, akwụkwọ nzipu, nnakọta ma ọ bụ ebuka na akaụntụ nke ụlọ ọrụ ọ bụla ga-edebe.
Ọrụ na nhazi oge
Mgbe ụfọdụ na ụlọ ọrụ njehie njehie na-eme: a na-edobe nzukọ na ụbọchị ejirila, ma ọ bụ oge edoghị anya maka ụfọdụ ọrụ. A ọma management usoro ga-edozi nsogbu ndị a niile, nke mere na ị nwere ike ịlele na a ilekiri na burukwa setịpụrụ dị ka ị chọrọ.
Oge ndị ọrụ na akụkụ anọ
Icheta ezumike ndị ọrụ na ụbọchị ezumike ga-abụ otu isi isi ọwụwa maka ndị were ọrụ na ndị njikwa. Site na mmemme ụlọ ọrụ dị mma, nke a bụ ihe gara aga. Ị nwere ike ebuli quadrants na oge nke mere na ị ga-enweta ọtụtụ ihe aka gị n’aka mmadụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Eziokwu na akụkọ » StartUps na ndi oru itumgbere ahia » Nsogbu 5 maka onye ọchụnta ego ọ bụla a ga-edozi site na ngwanrọ njikwa nke ọma
Etu esi echekwa ego na eCommerce?
Igodo maka mkpọsa eCommerce SEO gị ga-aga nke ọma